Cudurka Buufiska |
Sidee Loo Ogaan Karaa Da’da Ilmaha Kujira Caloosha Hooyada?
Ciise Cabdullaahi, May 18, 2019
Tuke Somalism — August 13, 2015
Saan ogsoonahay cudurka buufiska ah waa qeeb ka mid ah waalida, Soomaali hadaanu nahay, waxaanu naqaanaa qof fayoow(miyir qabo) iyo qof waalan oo la xirxiro, intaas wax ka dhaxeeya Soomaali hadaan nahay maba aaminsanin! Sidaa darteed, cudurka buufiska la yiraahdo ayaa qeebihiisa sii batey marka la sii tix-raacey. Maxaad ka taqaanaa cudurka buufiska ah iyo qeebihiisa kala duwan bal.
Tusaale ahaan “inuu qof is moodo wax uusan aheyn” waa cudur halis ah! Waxaa jiray nin ismooday inuu yahay xabbad masago ah, inuu qof yahayba iskuma uusan maleen jirin. Nin wuxuu ahaa siddiisa kale caadi u ah oo fayow oo aadan wax yarna ka dareemayn. Dhibta keliya ee ninkaas haysay waxay ahayd Digaagga oo uusan arki karin oo uu ka baqayay inay gaf siiyaan( oo cunaan!), cabsidiisa koobaad taas ayey aheyd, sidaa darteed ayuu isku moodey inuu yahay xabbad masago ah. Isbitaal baa la geeyey oo muddo dheer la daaweynayey oo laga dhaadhicinayey inuu qof yahay. Ugu dambaystii, markii imtixaankii laga qaaday uu ku gudbay oo la yiri waad bixi kartaa, buu inta dhaqaaqay haddana dib usoo noqday oo takhaatiirtii su’aal waydiiya. “Anigu hadda waan fahansanahay inaan qof ahay, laakiin digaagga ma loo sheegay inaanan masaggo ahayn !!!”. Isbitaalkii baa lugu ceshey
Kalmada buufiska, waxay noqotay kalmad dadka badan isticmaalan oo aan looba arkin in uu cudur yahay. Dhibaatoyin badan beyleeyihin cudurada buufiska ama maskaxeed. Marka waan in aan kawarqabno qeybabka cudurka buufiska iyo calaamadihisa. Waa in aanan iska dhaa-dhacsiinin in qof miyir qabo ama waalan kaliya jiraan. Marka buufis ama isku buuq maxey yihiin, siddee u kala baxaan iyo siddee baa lagu gartaa?
1-Buufis ama isku buuq (depression)
2-Cudurada suuro (Mood disorders)
3-ISku buuq weyn (Major depression) iyo isbadal dabeecadeed (Bipolar disorder)
4-Isku buuq bacdal umul (postnatal depression)
Nin baa hadda ka hor isagoo oo koob caana cabayo ayaa waxaa kor ka soo dhaceey baraanbaro markaasey baranbaradii wajigiisa ku dhacdey balse dhinaca kale ayey u faniintey, ninkii wuxuu iska dhaadhiciyey in ay baranbaradii ay koobkiisa ku dhacdey kadibna caanihii uu cabayey ay raacdey ilaa calooshiisa.
Ninkii baa qeela halkan la fadhiistey, oohin, dagaal, baranbaradii waan arkayey markey dhuunteyda galaysay oo waa tan caloosheyda iyo xididadeyda ayey jaqeysaa oo xiidmihii ayey dhaarineysaa oo ay jarjareysaa, ninkii tacbaan ayuu noqdey suu u qeelinayey “hala iga soo saaro baranbarad“, iga soo bixiya, naf iguma jirto.ninkii isbitaalka ayaa la keenay, oo dhakhaatiirtii oo dhan ayaa raajo iyo wiisito wax kasta lagu eegay, waxba waa laga waayey.
Dhakhaatiirtii buu ku yiraahdaa wey igu jirtaa baranbarada wey i jarjaraysaa socodkeeda ayaan dareemayaa ee iga soo bixiya. Markii la waayey, ayaa dhakhtarkii shiineeska ahaa go’aansadey in ninkan uu hayo buufis iyo cilmu nafsi iyo shaki weyn, kadib shiineeskii baa ninkii ku yiri seexo Inta tuubo dheer afka laga galiyey la yiri waan kaa soo saareenaa intaan xoog kaaga matajino, waa la suuxiyey, dhakhtarkii baa baranbaro caadi ah soo qabtey, ninkii baa xoog looga matajiyey, matagiisa ayaa la dhax dhigey baranbaro weyn oo dhaqdhaqaaqeeso ku dhax ordeyso meeshuu ninka ku matagay, ninkii baa inta soo toosey yiri “maxaan idiin sheegay waxa intaa la eg baa igu jirayee oo jirkeygi jarjarayay”
Marka ay kaa jajaban tahay ama aad murugeysan tahay waa dareen qof kasta saameyn karta. Waana caadi iney qeyb ka ahaato caadifada kala duwan ee dadka soo mara. Waana caadifo ama dareen faa’iido leh. Waxeyn toban-jirka garansiisaa mushkilooyinka iyo sida dhibaatooyinka loo qaabili lahaa. Hadii murugada buufiska ay tagi weyso ama caqabad ay ku noqoto hawl maalmeedka, markaa waxaa qasab ah in buufiska la ogaado lana daaweeyo. Marka barbarka dareenkiisa uu qaso wax qabadkiisa, waxey taa tilmaameysaa in caadifad ahaan uu si daran u jaha wareersan yahay.
Calaamadaha buufiska ayaa si kala duwan bey uga mooqan karaan qofka siiba caruurta barbaarta . Waxaana ka mid ah calaamadahaas
Heerka tabarta oo kordha, waxaana ka mid ah
kacsanaan, xasilooni daro, hor iyo gadaal u socosho.
Dareemid wax matarnimo ah, isyasid, ama isku kalsoonidoo la waayo.
Calaamadaha la socda:
Calaamado jirka quseeya:
Sida madax xanuun ama calool xanuun
La soco qeybta labaad……..
Next post Maxaa Sababa Buufiska? Cudurka Buufiska (Qeybtii Labaad)
Previous post Hooyadii Isha La’ayd - Waa qiso xanuun badan oo xaqiiqo ah